Ukukhanya okufanelekileyo kwi-aquarium | Ngeentlanzi
Kubaluleke kakhulu ukuba kuthathelwe ingqalelo umgangatho wokukhanyisa kwi-aquarium, ngakumbi ukuba sinezityalo, ukuze kubekho ukukhanya okuchanekileyo. Ezi zidinga ubungakanani obaneleyo ukuze zikwazi ukwenza ifotosinthesisi, kunye nomgangatho wokukhanya okukufuphi kangangoko kunoko kukhutshwa lilanga, kunciphisa imveliso yolwandle.
La ukukhanya kunye nokuhluza ligazi lobomi be-aquarium ukugcina ikhosistim kunye neentlanzi zikwimeko ezifanelekileyo. Kuya kufuneka kukhunjulwe ukuba indawo evaliweyo kufuneka silungelelanise iimeko ezifanayo nezo banazo ngaphandle.
Okokuqala, kufuneka kuthathelwe ingqalelo oko umgangatho awufani nobungakanani bokukhanya. Umgangatho ulinganiswa ngumbala wokunikezela ngesalathiso kuba sisakhono sesibane ukubonisa imibala ngokungathi zibonwe kukukhanya kwendalo. Kwaye isixa siboniswa kwi-lumen, leyo yimilinganiselo esinokuthi sazi ngayo inani lokukhanya elikuphumayo. Kuxhomekeke Inani leelitha ze-aquarium ke kuya kufuneka sibeke ukukhanya ukulungiselela uphuhliso oluchanekileyo lwezityalo kunye ne-ecosystem yaselwandle.
Xa ukhetha ukukhanya, sinokufumanisa ukuba kukho iintlobo ezininzi zezibane kwimarike. Ukuba siyayibona loo nto yethu izityalo ziyeke ukukhula, zibune, okanye zibe mnyama, Kuya kufuneka sikubone ukukhanya kwi-aquarium yethu kuba ihlwempuzekile.
Ezona ziqhelekileyo zi I-fluorescent kwaye isetyenziswa kakhulu kwi-aquarium, nangona ukuhamba kwexesha baye bavela kakhulu. Ngetyhubhu ufumana ukukhanya kunye neewat ezingaphezulu kwezindala. Izibane zeFluorescent ezineetyhubhu ezigobileyo zisetyenziselwa iindawo ezincinci.
La ukukhanya okukhokelwayo, Ingathathelwa ingqalelo njengoyena ubalulekileyo kwimarike, ukusetyenziswa kancinci kunye nokungena kwayo kokukhanya emanzini kunye nezibane zayo ziba libango labathandi behlabathi lolwandle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Ii-Aquariums ze-DIY » Ukukhanya okufanelekileyo kwi-aquarium